Ministeran'ny Fizahantany : mirary fetin'ny krismasy sy taom-baovao sambatra
Posted on décembre 24, 2018 by collab
Amin’izao ankatoky ny Fetin’ny krismasy sy ny Faran’ny taona 2018 izao, dia nizara nofon- kena mitam-pihavanana toy ny vary, menaka,vorona, sns, ho an’ny mpiara-miasa rehetra aminy Andriamatoa Minisitry ny Fizahantany, Jean Brunelle Razafintsiandraofa, anio Alatsinainy 24 desambra 2018 tao amin’ny toeram-piasany ao Tsimbazaza.
Nivoatra tamin’ny lahateny nataony ny ezaka lehibe vitan’ny ministera nandritra izay enim-bolana nitondrany ny ministeran’ny Fizahantany izay.
Tsy nohadinoiny ny nisaotra sy nankasitraka ny mpiara miasa rehetra satria na dia teo aza ny olana hita teo amin’ny lafin’ny fizahantany, toy ny tsy fandriam-pahalemana, dia tsy nanakana ny vokatra azo izany.
Tsara homarihina fa efa ao anatin’ny lamin’asa ny ministera ihany koa ny fametrahana ny sampandraharam-panjakana misahana ny fizahantany eo anivon’ny Distrika amin’ny taona 2019 ho avy io, ka nanentana sahady ireo mpiara-miasa aminy Andriamatoa Ministra amin’ny fanatanterahana izany toy ny fahavononana ny hiasa any amin’ireo toerana ireo.
Tsy nitsahatra teo ny fizarana fifaliana amin’izao asaramanitra izao fa notoloran’ Andriamatoa Minisitra valisoa ihany koa ireo atileta maro nahazo ny medaly volamena tamin’ny lalao “ASIEF 2018” izay notontosaina tany Toamasina farany teo. Voalohany teto amin’ny Ministera izao hetsika izao.
Tsy very anjara ireo mpanao fanantanjahan-tena amin’ny taranja basikety sy baolina kitra fa notolorany maillot, baolina, sns ihany koa izy ireo, ary namporisika ny hafa mba hanatevin-daharana ka hampitombo ny medaly volamena.
Nirary soa sy fahombiazana ho an’ny mpiara-miasa sy ny fianakaviana tsirairay avy Andriamatoa Minisitra.
Tamin’ny fandraisam-pitenenana nataon’ny solontenan’ny mpiasa dia nankasitraka sy nisaotra an’Andriamatoa Minisitra tamin’ireo fanomezana maro dia maro hafahan’ny rehetra manao fety sambatra, ary dia naneho hatrany ny fahavononana ny hiara hiasa hatrany hatrany narahina tsodrano.
Faly avokoa ireo mpiara-miasa rehetra satria tsy vita ny fisaorana sy ny firarian-tsoa ihany fa dia mbola nahazo fanomezana ho enti-mody izy ireo hanaovana Fety Sambatra miaraka amin’ny Fianakaviana.